Muuqaal: Al-Shabaab oo soo saartay filim-ka jabkii Kenya loogu geystay weerarkii Kulbiyow - Hablaha Media Network
Muuqaal: Al-Shabaab oo soo saartay filim-ka jabkii Kenya loogu geystay weerarkii Kulbiyow
HMN:- Mu’asasada Al-Kataa’ib, Garabka Warbaahineed ee Xarakada Al-Shabaab ayaa si rasmi ah u baahisay Filim weyn oo lagu soo bandhigayo Howlgallo waa weyn oo Al-Shabaab ay ka fuliyeen Soomaaliya.
Filimkan oo Cinwaankiisu Yahay “لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ” ayey Mu’asasada Al-kataa’ib ku sheegtay in uu yahay Wathaa’iqi soo bandhigaya duullaankii lagu qaaday xerada ciidamada Kenya ee Kulbiyow dhamaadkii bishii January ee sanadkan kaas oo lagu dilay ugu yaraan 67 askari.
Waxaa filimkan cusub lagu tarjumay ugu yaraan afar luuqadood oo kala ah English, Carabi, Soomaali iyo Swahili. Hakaan hoose ka daawo filimka oo dhameystiran.
HALKAAN KA DAAWO MUUQAALKA OO DHAMEYSTIRAN